Okuhle, njengoba wazi, kuyisitha sezinto ezinhle. Ngomzamo wokwakha ingaphakathi elungisiwe, ngezinye izikhathi sikhohlwe ukuthi kufanele kube lukhululekile ekuphileni kwansuku zonke. Uma kuziwa ekhishini, umdlandla onjalo ungaholela ekuziphatheni okwenziwe kabi, ukungcola kwezimali kanye nesikhathi okungadingekile. Yeka ukuthi ungabanjwa kanjani? Sifunda izinto eziyisisekelo futhi sibhekane nezinyathelo zokuklama kwekhishi.
Uxhomeke ekukhethweni kwe-flooring. Yiqiniso, i-parquet inhle, i-laminate iyinhle futhi iyancishisa kakhulu, futhi isikhwama singcono futhi sinobuciko. Kodwa kubalulekile ukukhumbuza ukuthi lezizinto zisezingeni elingenakuqhathaniswa ekuxhashazweni: ngenxa yokushisa okuphezulu kanye nemonakalo bangakwazi ukuguqula, ukuphahlazeka, ukuthatha ukungcola kanye nephunga. Isixazululo esiphezulu sinhlanganisela yezinhlobo ezimbalwa zokugqoka: ngoba indawo yokupheka kufanelekile ukukhetha itilekhi enamandla ye-ceramic-granite noma itshe, futhi ekamelweni lokudlela - amaphaneli enkuni noma ekhokheni.
Qaphela ngezingqimba ezikhanyayo. Ukubheka okukhanyayo kwamakhishi ekhishini ngokuphumelelayo kubonisa ukukhanya, ukubukeka ngeso lengqondo ukuveza isikhala futhi - kungabonakali ngokuphawulekayo ukukhombisa ukulandelana kwamanzi, amabala amanzi kanye neminwe, kanye namaconsi amafutha, uthuli kanye nenqwaba. Uma ungafuni ukuchitha amahora ukuhlanza ifenisha kusuka emahlahleni, qaphela amaphaneli ase-matte ebangeni le-pastel. Babheka ubuhle futhi-kubalulekile - ukungathobeki ekunakekeleni kwabo.
I-apron iyindawo ebalulekile yekhishi: ivikela ngokuphelele izindonga kusukela ekuthandeni kwama-aromas nokudaka ngesikhathi sokupheka. Uma ufuna ngokuphelele ukugcina isiphetho sokuqala - yenza okuthandayo iphaneli yesilazi esilungisiwe: obala, kodwa oqinile futhi onokwethenjelwa.
Umklamo wangaphakathi wekamelo lokuphumula ngendlela yesitayela
Igumbi lomntwana osanda kuzalwa
I-chic yaseParis: izimfihlo zengaphakathi "lesiFulentshi"
Izinto ezibangela inhlalakahle yomndeni
Indawo yokusebenza ekhishini: amathiphu amaningana wokuklama kwawo
Senza iwindi ngendlela efanele: indlela yokukhetha i-cornice yamakhethini
Kuthiwani uma umfana echitha imali eningi emotweni
Cure induna ekhaya
Indlela yokuhlanza ifenisha ehlaselwe ekhaya
Indlela yokulungisa i-aquarium ngaphambi kokusungula inhlanzi
I-roll lavash ne inyama egayiwe
Ukuxoxisana no-Alexander Pedan owaziwayo
U-Alena Vodonaeva uthe akadingi amadoda
Vula: ukwakheka, izinzuzo nezakhiwo, uhlelo lokusebenza emithi
Kungcono kakhulu ukukhetha inqubo yokudla
Indlela yokuthola isibalo esiphelele ku-50: imfihlo ephezulu evela ku-Halle Berry
Ucansi lwesithathu. Ubani okwesithathu?
Ungakhetha kanjani inqubo yokudla efanele?
Indlela yokukhetha isithunzi sobuso kwesokudla?
Ikhukhi elifushane lokushokoledi